kasbashada dhacdooyinka | khayraadka shaqo iyo xirfado USAHello | USAHello
dhacdooyinka xiriirinta waa soo ururiyo dadka xirfadeed. Waxaad la kulmi doontaa dad dhacdooyinka kasbashada kuwaas oo kaa caawin karaan inaad hesho shaqo. Baro meesha laga helo dhacdooyinka iyo waxa la sameeyo xaflad.
Waa maxay dhacdo xirka a?
dhacdooyinka kasbashada yihiin dhacdooyinka bulshada loogu talagalay dadka kuwaas oo raadinaya shaqo iyo dadka la wadaago talo mustaqbalkiisa. Waxaa jira websites in aad u sheegto meesha dhacdooyinka jira. Waxaad dareemi doontaa wax ka yar habdhiska haddii aad ku dhaqmaan wixii ay ku odhan, waxa aad soo, iyo sida loola hadlo dadka ka hor waxaad aadi. Waxaad sidoo kale shabakadda kartaa internetka iyo telefoonkaba.
dhacdooyinka xiriirinta ka mid noqon kara khudbado, cashooyin, ama "saacadood ku faraxsanahay." saacadood faraxsan isugu halkaas oo ay dadku ka hadlayaan in ka badan cabitaanka iyo cuntada. dhacdooyinka intooda badan waa galabtii ama fiidkii.
dhacdooyinka kasbashada inta badan waa shaqooyin heer xirfadeed, laakiin waxaa jira qaar ka mid ah dhacdooyinka heerarka oo dhan. Tusaale ahaan, carwooyinka mustaqbalkiisa dhacdooyin halka aad ka heli laga yaabaa in shaqo-badan oo ka mid ah warshadaha ama hal meel. Waxay isugu yimaadeen in ka mid ah meel si aad u hesho shaqaalaha.
Sida loo helo dhacdooyinka xiriirinta
Isticmaal website a isku xirka - websites ay ka mid yihiin eventbrite.com iyo meetup.com. Waxaad geli kartaa cinwaanka iyo ogaato fursadaha xor ah oo raqiis ah meesha aad degan tahay.
Raadi dhacdooyinka xiriirinta degaanka - iyoWaxaad ka eegi kartaa munaasabadaha la xiriira xarumaha bulshada, kaniisadaha, masaajidda, oo sunagogyada. Si aad u heshid xarunta beesha ama meel lagu cibaadaysto, waxaad ka raadin kartaa online for "xarunta bulshada ee [magaalada ama xaafada aad]."Ama aad awoodid heli maktabadda degaankaaga oo weydii haddii ay qabaan dhacdooyinka.
Helitaanka diyaar u dhacdo xirka a
Networking ma dareemi kartaa dabiici ah in aad haddii aadan u sameeyeen ka hor. Kulan shisheeyayaal dareemi karaa raaxo marka hore. Xusuusnow in wax walba uu helo fudud ula dhaqanka.
Layliska garoonka wiishka aad
garoonka wiishka waa macluumaadka adiga kugu saabsan in la yidhaahdo xaflad xirka a. Waxaa lagu magacaabaa ah garoonka wiishka sababtoo ah waa gaaban - waa in aad si aad u yidhaahdaan oo dhan, halka fuushan wiish awoodi! garoonka waxaa ka mid ah magacaaga, xirfaddaada, iyo shaqooyinka aad raadinayso. Layliska garoonka si aad u xusuusan waqtiga oo dhan. garoonka A iyo sidoo kale-Akhriyo siinaysaa aragti ugu horeysay weyn. Waa kuwan tusaalooyin:
"Magacaygu waa Juana. Anigu waxaan ahay nanny ah oo aan la soo shaqeeyay, waayo, 5 qoysaska ee Mexico. Waxaan doondoonayaa shaqada buuxa ama waqti-dhiman daryeelka qaadashada carruurta da 'kasta. "
"Magacaygu waa Samir. Anigu waxaan ahay xisaabiye la 4 sano oo khibrad ah ee shirkadaha maalgashiga ee Iran. Waxaan doondoonayaa meel xisaabiyaha yar.”
Soo qaado kaararka ganacsiga
Kaararka Business waa kaar yar oo leh magacaaga, lambarka taleefanka, email iyo xirfad ama shaqo. shaqo waxay noqon kartaa mid aad hadda ama mid ka mid ah ayaa aad loo tababaray, waayo,. Kaararka Business yihiin aad u faa'iido badan dhacdooyinka xiriirinta. Waxay kuu ogolaanaysa inaad si deg deg ah ay is dhaafsadaan macluumaadka. Waxaad o kartaankaararka ganacsiga rder dukaamada qalabka xafiiska ama online.
Waa inaad u diyaargarowdaa! Waa in aad kaararka ganacsiga kula waqtiga oo dhan. Waxaad la kulmi kartaa qof ku caawin kara iyada oo saaxiib ama at dukaanada waaweyn.
At dhacdo xirka ah
Waxaa jira waxyaabo aad samayn karto si lagaaga caawiyo in aad ku guulaysteen kasbashada dhacdooyinka. Waxa kale oo jira waxyaabo aan la samayn!
Qaado waqtigaaga - ha isku dayin in uu la kulmo dad aad u badan. Waxaa fiican in aad la hadasho dadka ka yar iyo isku xiraan in uu socon doono.
Weydii kaarka ganacsi - Waxa kale oo aad u hubiso in dadka la siiyo kaarka.
Waxaad qaadataa qoraalo - qori wax kasta oo aad rabto in aad xusuusan on kaararka ganacsiga aad ka heli.
dabagal - diro fariimaha LinkedIn ama emails u mahadcelinayaa iyo joogaan taabashada.
Waxyaabaha aan la samayn
Ha weydiin Nicmada isla markiiba - sugaan ilaa iyo qofka aad la hadlayso wuxuu bixiyaa raalli ah, ama ay la hadlaan ka dib markii ay dhacdo.
Hadal ha isku saabsan oo aad u badan - ma kala go'do qofka aad la hadlayso. Weydii su'aalo iyo jawaabaan oo kaliya marka la sameeyo.
Ha ka hadlaan siyaasadda, diinta - diiradda saaraan hadalka ku saabsan shaqooyinka iyo xirfadaha
Daawo this video tusaale caadooyinka xirka wanaagsan
Su'aalaha si aad u weydiiso marka kasbashada
Waxaa laga yaabaa inay ku adag tahay in ay ogaadaan wixii ay ku odhan qof aadan la kulmay ka hor. Halkan waxaa ku qoran xoogaa su'aalo ah waxaad ka codsan kartaa.
"Halkee ka timid?"
"Waa maxay qayb aad jeceshahay ee aad shaqo?"
"Sidee ayaad maqli ku saabsan dhacdadan?"
"Dheeraad ah oo ku saabsan waxa aad sameyn Ma ii sheegi kari?"
"Ma ogi shirkadaha kasta waxaa hadda shaqaaleynta aad?"
Noocyada kale ee shabakadaha
laga yaabaa in aadan haysan waqti ay ku dhacdooyinka kasbashada qof ahaan tagto. Waxaa jira siyaabo kale in ay ballaariso aad network xirfadeed. Waxaad ku biiri kartaa shabakadda internetka, oo waad heesi kartaa ilaa waraysi online ama phone macluumaad.
LinkedIn waa website halkaas oo aad ku xidhan karto dadka kale ee shaqaalaha. Waxay u eg tahay Facebook, laakiin shaqada. Waxaad la abuuro profile ah in uu ka hadlayaa aad waayo-aragnimo xirfadeed. Waxaad la hadli kartaa dadka, raadsado shaqooyinka, iyo boostada iyo akhriyey articles. Waxaa ugu caansan ee Maraykanka, laakiin dad badan oo dunida dacaladeeda ah ayaa ku isticmaalaya. Tallaabada ugu horreysa waa in la diiwaan profile LinkedIn a.
wareysi macluumaad waa wada hadal kula qof shaqo aad rabto in aad ku samayn. wada hadalka Tani waxay noqon kartaa in qofka, telefoonka, ama on a call computer video. Wareysiga waa in ay ku saabsan 30 daqiiqo. Ujeeddadu waa in la maqlo ku saabsan khibradahooda iyo aad u hesho talo. Miyey u baahan tahay shahaadada? Maxaad ay resume eegto fiican yihiin kuwa kale?
Waxaad weydiin kartaa qof oo waraysi macluumaad dhex LinkedIn. Waxaad kaloo weydiin kartaa saaxiibada iyo kuway isbarteen. akhri top sideed su'aalo waydiiso wareysi macluumaad. Had iyo jeer hubi in aan u mahad celiyo qofka aad la hadashay in ay waqti.
fiiri waayo fursado shaqo